VeLondon vakashora COVID uye vakazorora kunze kwenyika kupfuura mamwe maBrits
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » VeLondon vakashora COVID uye vakazorora kunze kwenyika kupfuura mamwe maBrits
VeLondon vainyanya kuisa parutivi kunetseka uye kufuratira zano rekufamba panguva yedenda.
VeLondon varatidza kuti havadi kupfuura vanhu vanobva kumwe kuUK kuti vasiye zororo ravo repagore remhiri kwemakungwa panguva yedenda - kunyangwe zvichireva kupesana nemazano eHurumende, kubhadhara bvunzo dzekufamba dzeCovid uye kubhejera patraffic-light system - sekureva. kutsvagurudzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Vana mugumi (10%) veLondoners vakatora zororo remhiri kwemakungwa mugore rapfuura, zvakapetwa kaviri avhareji yenyika ye41%, uye kakapetwa katatu kupfuura vanhu vekuNorth East, iyo UK dunhu rakaona yakaderera nhamba yemazororo ekunze. yakatorwa mumwedzi gumi nemiviri yapfuura.
Vangori 13% yevanhu vanogara kuNorth East vakatora zororo remhiri kwemakungwa panguva iyi, inoratidza iyo WTM Indasitiri Report, iyo yakabvunzurudza vatengi zviuru zveUK.
Kaviri vanhu vekuLondon vakawanda kupfuura veavhareji yenyika vakabhuka BOTH zororo remhiri kwemakungwa uye pekugara, paine 9% yevanhu vari mudhorobha vachihodha zvese, zvichienzaniswa neavhareji yenyika ye4%.
36% chete yeLondoners havana kuenda kuzororo gore rapfuura - kungave pakugara kana rwendo rwemhiri kwemakungwa - zvichienzaniswa ne51% yeavhareji yenyika.
Zvinoita sekunge vanhu vemuLondon vakatsiga havana kubviswa neCovid bvunzo, shanduko-mwenje wemotokari uye kunyange zvikumbiro kubva kuHurumende uye nyanzvi dzakaramba dzichiyambira Brits kuti isaende kunze kwenyika - kunyangwe zvirambidzo zvekufamba zvarerutswa uye zvaive pamutemo kuzororo mhiri kwemakungwa.
Kushaikwa kwekusimuka kwedunhu panhandare dzendege kunze kweguta guru kunogonawo kuve chikonzero nei vanhu vazhinji veLondon kupfuura avhareji yenyika yakazorora kunze kwenyika mumwedzi gumi nemiviri yapfuura.
Pamusoro pezvo, kuvharika kwenzvimbo kwakaisa vamwe vanhu kuti vaende kunhandare dzendege dzaive mukati, kana kuti dzaikwanisa kuiswa mukati, imwe tier.
Mukuru weWTM London Exhibition Director Simon Press akati: "Ongororo yedu inoratidza kuti veLondon vangangosiya kushushikana uye kufuratira zano rekufamba panguva yedenda.
"Kusimuka kushoma kwedunhu uye kuvharika kwakawanda kwave kureva kuti vanhu vari kunze kweLondon havana kukwanisa kana kuda kubhururuka.
“Kunyangwe paitenderwa kufamba, pakanga paine kumanikidzwa kukuru kubva kumakurukota eHurumende nevapangamazano vehutano kuti vasafambe.
"Izvo, zvakasanganiswa nekuvhiringika uye mutengo webvunzo dzeCovid uye kuchinjika kwemirau yemwenje-mwenje, zvakatadzisa vanhu vazhinji kufamba, asi zvinoita sekunge veLondon vaive vakatsunga kupfuura vazhinji kuwana zororo ravo rekunze - zvisinei nekuwedzera. mari kana dambudziko."